Horakoraka eraky ny tanàna no re teto Antananarivo, ary mbola nisy fanapoahana afomanga aza tamina toerana sasantsasany, tao koa ny fanapoahana sarom-bilany. Resintsika 2-0 ny Super Eagles Nizerianina, izay sokajiana ho isan’ny “favori” ao anatin’izao CAN 2019 izao. Isika Malagasy irery no afaka nandavo azy ireo tao anatin’ny vondrona B, izay mametraka antsika ho laharana voalohany ao anatin’ny vondrona, ka tafiakatra any amin’ny dingana ampahavalon-dalana. Ny laharana faha-3 mendrika avy amin’ny Vondrona A na C na D no hifandona amintsika. Sambany teo amin’ny tantara isika no mandray anjara, saingy efa tena nanoratra sy manoratra tantara amin’izao CAN 2019 uzao. Fandresena sy fahombiazan’ny Firenena Malagasy manontolo sy mametraka antsika ho tsy azo tsinontsinoavina eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra eto Afrika izao, hany ka saika miresaka momba ny Barean’i Madagasikara ny vaovao ara-panatanjahantena maneran-tany amin’izao fotoana izao. Hahafahantsika miroso amin’ny dingana tsara hatrany izao ka ny hirariana dia hahomby hatramin’ny farany ny Barea.